कमिलालाई एकदिनअगाडी नै थाहा हुन्छ भूकम्पको बारेमा! - E Net Nepal
Home Amazing World कमिलालाई एकदिनअगाडी नै थाहा हुन्छ भूकम्पको बारेमा!
कमिलालाई एकदिनअगाडी नै थाहा हुन्छ भूकम्पको बारेमा!
E NET NEPAL 11:30 PM Amazing World,
बिज्ञान र प्रविधिले जतिसुकै विकास गरे पनि भूकम्पको बारेमा भने बिज्ञान र प्रवधिले सफल हुने मौका पाएको छैन। किनकि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रविधि आएको छैन जसले भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सकोस। हुन त जनावरहरुमध्ये कुकुर र बिरालोलाई भूकम्प जानुभन्दा केहि अगाडी थाहा हुन्छ रे भनिन्छ। तर कमिलालाई भने भूकम्प आउनुभन्दा एक दिनअगाडी नै यसको आभास हुन्छ, भन्ने कुरा बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन।
लाइभ साइन्सको रिपोर्ट अनुसार कमिलाहरुको यो बिशेषता जान्नको लागि जर्मनीस्थित यूनिवर्सिटी डिसबर्ग-एसेनका Gabriele Berberichले १५हजार भन्दा बढी रेडउड पहाडहरुको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए Berberich र उनका साथीहरुले भिडियो क्यामराको सहयोगले कमिलाहरुमाथि निगरानी राखे र एक बिशेष सफ्टवेयरको प्रयोगबाट कमिलाहरुको गतिविधिलाई सुक्ष्म रुपमा अध्यन गरे।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार रेडवुड कमिलाहरुले भूकम्पको समयमा चिरा परेका जमिनहरूमा आफ्नो बस्ति बसाउँछन। अध्यनमा उनीहरुले भूकम्प आउनुभन्दा १ दिनअगाडी र भूकम्पको एक दिनपछाडी कमिलाहरुको व्यवहार अध्ययन गरे जसमा एक दिनअगाडी कमिलाहरुको व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन देखा पर्छ भने एकदिनपछाडी पुन: पहिलाको जस्तै सामान्य व्यवहार देखा पर्न थाल्दछ।
Berberichको भनाइ छ कि "भूकम्प आउनुभन्दा एक दिनपहिले कमिलाहरु आफ्नो बासस्थान (पहाड)को बाहिर जाग्राम बस्छन जबकी सामान्य दिनमा दिनभरी काम गरिसकेपछि राति सबै सुत्छन।"
European Geosciences Unionको बार्षिक कार्यक्रममा पनि पेश गरिसकिएको यस खोजका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार' "कमिलालाई जमिनबाट निस्कने ग्यास र हलचलबाट भूकम्पको अन्दाज हुन्छ।"